Al-Shabaab weerar ku qaaday fariisin Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin Deegaanka Garsaale ee duleedka Magaalada Jowhar
Al-Shabaab weerar ku qaaday fariisin Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin Deegaanka Garsaale ee duleedka Magaalada Jowhar Mogadishu Talaado 4 December 2012 SMC
Al-Shabaab weerar ku qaaday fariisin Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin Deegaanka Garsaale ee duleedka Magaalada Jowhar .
Wararka ka imaanaya Magaalada jowhar ee Gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in weerar ay ku aqeeyeen Al-Shabaab fariisin Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin Deegaan lagu magacaabo garsaale oo dhowr KM u jira magaalada Jowhar.
Dagaalkaasi ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo daryanka madaafiicda la isku adeegsanaayay dagaalkaasi laga maqlaayay daafaha magaalada Jowhar.
Wararku waxay sheegayaan in dagaalkaasi ay ku dhintee ilaa sideed ruux oo ka tirsan dhinacyadii dagaalamaayay, wuxuuna dagaalkaasi bilowday kaddib markii Al-Sabaab ay iyagu weerar ku soo qaadeen saldhiga ciidamada ay ku leeyihiin deegaanka Garsaale, wuxuuna dagaalkaan noqonaayaa kii ugu cuslaa oo ay ciidamada Dowladda ee ku sugan Sh/dhexe ay ku soo qaadaan.
Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu magacaabo Asad Qaasim ayaa sheegay in 13- ka mid ah Maleeshiyaadka Al-Shabaab inay ku dileen dagaalkaasi, islamarkaana uu dagaalkaasi socday muddo saacado ah, wuxuuna sheegay inay dhinacooda uu kaga dhintay hal askari laba kalena ay kaga dhaawacmeen.